Bathsa ahụ, ịhịa aka n'ahụ, ahụike | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Bath, Massage, Mma
Kedu ụdị klas FLEX Stretching? Kedu ihe ha na-emetụta ma na-enye aka?
Gịnị bụ klasịsịịịịị FLEX? Kedu ihe ha na-emetụta ma nyere aka? ee ... ugbua ebe a na choreographic setịpụrụ site na afọ asaa, rue mgbe akwara na-agbatị! na ebe a, "kedu ...
Enwere m ike ịtụkwasị ịnyịnya ibu m?
Enwere m ike ịtụkwasị ịnyịnya ibu m? Ntucha anaghị ebubata. Squatting swing thighs. Galina, anya na ụbụrụ ọkụkọ ma ọ bụghị mmetụta dị otú ahụ ugbu a na-enye ihe a: ịkwanye ịnyịnya ibu ONYỊ site n'ámá ma ị nwere ike!
Ntughari disverberal disseral na mkpanaka dural sac!
Ntughari disverberal disseral na mkpanaka dural sac! Ntugharị bụ mmalite nke hernia) na o yiri ka ọ na-emetụta ọrịa)) ndụmọdụ (ma ọ bụrụ na protrusion na thoracic ma ọ bụ lumbar vertebra) kwadoro na ...
Kedu ihe ndị mmadụ na-eme? Kedu ihe aerobics ??
Kedu ihe ndị mmadụ na-eme? Kedu ihe aerobics ?? Aero # 769; bika (nke a makwaara dị ka ntụrụndụ rhythmic gymnastics) gymnastics na egwu egwu nke na-enyere aka nyochaa afọ nke omume ahụ. Ihe mgbagwoju nke ihe omumu bu ...
Masshịa aka na mmiri Lymphatic - gịnị ka ọ bụ?
Masshịa aka na mmiri Lymphatic - gịnị ka ọ bụ? A na-eme mmiri ịhịa aka n'ahụ aka iji kpochapụ nsị anụ ahụ, mee ka lymph dịkwuo elu, kwalite metabolism na nri, yana iwepụ nsị na-arụ ọrụ. Isi ...
Ego ole ka ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-ahụ maka otu ụbọchị n'ụbọchị? Kedu ihe bụ ụkpụrụ dịka koodu ọrụ?
Ego ole ka ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-ahụ maka otu ụbọchị n'ụbọchị? Kedu ihe bụ ụkpụrụ dịka koodu ọrụ? 15-20 mmadụ 36 M. Ye. Na ụbọchị 5 na oge 8 na-arụ ọrụ n'ụbọchị. na Usoro Ọrụ ...
azụ mgbu. Azụ m na-enwe mwute mgbe ogologo oge nọ n'oche na-enyere aka gwọọ
azụ mgbu. Azụ m na-ewute m mgbe ị nọdụrụ ọdụ n'oche. Nyere m aka gwọọ. Gbalịa ịghara ịnọdụ n'oche oche, kama n'elu oche. e nwere ezi saịtị nye gị mail !! ! ...
Ịga sauna maka oge mbụ. Kedu ihe ị ga - eji?
Ịga sauna maka oge mbụ. Kedu ihe ị ga - eji? girlfriends .. girlfriends biya na enyi nwoke ihe ọ bụla! akwa akwa, ntutu ntutu isi, nnu - maka nsị n'ime ahụ, na-abanye n'ime, mgbe a kwọchara mmiri na ...
Kedu ihe toxins? Ndien ntak emi ẹwụtde mmọ?
Kedu ihe toxins? Ndien ntak emi ẹwụtde mmọ? Anaghị agụkwa m na avatar nke Valeria. Nnyocha e mere egosiwo na ihe gbasara 98% nke ọnwụ niile n'ụwa nile bụ ọrịa dị iche iche. ...
Na-emerụ ahụ ike ụkwụ mgbe ọ kwụsịrị ibu. Ihe ị ga-eme
Na-emerụ ahụ ike ụkwụ mgbe ọ kwụsịrị ibu. Ihe ị ga-eme Gbalịa mmiri, mgbe ọ bụla ọkpụkpụ adịghị emerụ ahụ Ha onwe ha ga-agafe! ọ dịghị ụzọ ị ga-esi enyere aka ma ọ bụrụ na ha na-ewute gị mgbe ị kwụsịrị ibu ahụ. Massage, ...
Ebee ka ị ga-asa? Moscow
Ebee ka ịsa ahụ? Ime ụlọ ịwụ Moscow Kuntsevsky - 350 rubles oge a na-akparaghị ókè Enwere ọtụtụ nhọrọ: 1. Zụta igwe na-agba mmiri. N’afọ ọzọ, ha ga-agbanyụ ya ọzọ, ọ ga-adabara. Dị ọnụ ala (nke ọma ...
banyere ịhịa aka n'ahụ. Dee uri banyere ịhịa aka n'ahụ. Dịkarịa ala 4 ahịrị
banyere ịhịa aka n'ahụ. Dee uri banyere ịhịa aka n'ahụ. Ma ọ dịkarịa ala 4 ahịrị Anyị ga-agbalị iche maka mmalite, Olee otú obi dị nro n'ahụ gị Envelopes dị ka blanketị Ọ bụ ogologo oge iji zuo ike chọrọ Na onye ...
Ọ dị m mkpa ịnweta ọzụzụ ahụike iji rụọ ọrụ dị ka onye na-agwọ ọrịa ma ọ bụ nanị mechaa ọmụmụ ihe?
Ọ dị m mkpa ịnweta ọzụzụ ahụike iji rụọ ọrụ dị ka onye na-agwọ ọrịa ma ọ bụ nanị mechaa ọmụmụ ihe? N'ezie. na ndị ọzọ. echela na nke a dị mfe na nnukwu ego. nke a bụ ọrụ dị arọ na nke omume.
Esi esi gbaputa akwara latissimus azụ nku.
Ot'u esi esi kpoo akwara latissimus azụ nku ya .. ụfọdụ n'ime hardening: 1. kpopụ aka, azụ nke isi na 2. na-eguzo, mkpanaka na-adọta n'ime afo nke 3. na azụ dị ka ala, otu ụkwụ n'ala ...
Kedu ihe ị ga-eme iji soro gị gaa n'ụlọ ịsa ahụ?
Kedu ihe ị ga-eme iji soro gị gaa n'ụlọ ịsa ahụ? Banshchika, ọ ga-ewe ndị ọzọ! Ya mere, anyị na-aga ịsa ahụ. Kedu ihe m ga-eji soro m gaa n'ụlọ ịsa ahụ ma e wezụga linen dị ọcha? Ya mere anyi deputara: ...
Kedu otu esi eji osisi bamboo n'ime bat? Ị ga-agba ha mmiri?
Kedu otu esi eji osisi bamboo n'ime bat? Ị ga-agba ha mmiri? banyere acho brooms m na-amaghị. A na-eji ihe eji eme ihe dị ka ịhịa aka n'ahụ. Jiri ya dịka mkpanaka. Naanị nke a emeghị n'ime steam ụlọ, ma mgbe ....
Kedu esi agbagha azụ gị, na-enweghị enyemaka mmadụ, n'onwe gị?
Etu ị ga - esi wepu azụ gị onwe gị, n'enweghị enyemaka, onwe gị? Ngwọta onwe onye bu ihe nka siri ike mana odi nkpa nke imebi onwe ya! Mgbe ụfọdụ ọ na - enyere aka ịdina n’ala, kpudo ikpere aka na obi, jide aka gị abụọ. Nyefee na ...
kedu ihe bụ bath hamam?
kedu ihe bụ bath hamam? Turkish bath with kisyachi (Ọ bụ mgbe azụ rubs na akwa washcloth-ọ na-ewepu unyi) Anyị nọ na Turkey wee gaa na-asa ahụ. Nke a bụ ụlọ nwere cone ...
Kedu aha ziri ezi maka cardio simulator skis?
Kedu aha ziri ezi maka cardio simulator skis? Igwe cardio bụ simulators na-eme ka ihe dị mma maka ụmụ mmadụ: na-agba ọsọ, na-eje ije n'elu skis, na-arịgo n'elu steepụ, na-agbagharị, na-agba ịnyịnya. Dika nke a, ...
Ịgba ígwè bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ pịa?
Ịgba ígwè bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ pịa? nke a bụ ezigbo ihe omumu maka ikpere nkwonkwo na ligaments ... Ụkwụ bụ otu n'ime ihe ndị mara mma!
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,432.